नगरभित्रकै गाउँमा खानेपानीको हाहाकार » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नगरभित्रकै गाउँमा खानेपानीको हाहाकार
मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:३१ मा प्रकाशित !
बझाङ, जेठ ३० गते । मान्छेको सोच हुन्छ– नगरपालिका भएपछि जनताले पाउने सेवा सुविधा र विभिन्न विकासका पूर्वाधारको छिटो विकास हुन्छ भनेर । तर बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाभित्रकै कुनै गाउँ यस्ता छन् कि जहाँ पाँच लिटर पिउने पानीका लागि तीन घन्टा पैदल हिँडेर गुजारा चलाइरहेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: ‘चुनाव अब सर्दैन असार १४ लाइ पक्का ’
NEXT POST Next post: महिला रक्तदाताको सङ्ख्या न्युन ५० वर्षमा पनि
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:३१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:३१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:३१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:३१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ ३०, २०७४ १३:३१